Imisa bilood ayuu garoommada ka maqnaanayaa Daafaca Manchester United Eric Bailly? – Gool FM
Imisa bilood ayuu garoommada ka maqnaanayaa Daafaca Manchester United Eric Bailly?
(Manchester), 25 Okt 2016 –Daafaca Dhexe ee kooxda Manchester United, Eric Bailly oo dhaawac jilibka ah soo gaaray kulankii United iyo Chelsea 0-4, ayaa haatan la shaaciyay inuu garoommada ka maqnaan doono muddo laba bilood ah.
Bailley oo Man United ku soo biiray xagaagan markii ay £30 Milyan kaga soo iibsatay kooxda Villarreal ayaa farriin uu soo dhigay Instagram waxa uu u mahad celiyay dhammaan taageerayaasha u muujiyay niyad wanaagga tan iyo markii dhaawucu soo gaaray, isagoo xusay inuu si deg deg ah u soo laaban doonno.
Ciyaaryahan Bailley oo 22 jir ah ayaa seegi doona kulammo muhiim ah oo ay Manchester United la dheeli doonto; Arsenal, Everton iyo Tottenham waloow la rajaynayo inuu ka soo gaari doono kulanka xulkiisa Ivory Coast dheeli doono sanadka cusub.
Xiriirka Kubadda Cagta FIFA oo ganaax dul dhigay Xiriirka Kubadda Cagta Spain
GOOGOOSKA: Arsenal vs Reading 2-0 (Arsenal oo adeegatey)